XOG: Xildhibaanada & Siyaasiyiinta oo bilaabay iney ka guuraan Hotelada ka fog xeydaabyada Dowladda ee ammaankooda la adkeeyo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Xildhibaanada & Siyaasiyiinta oo bilaabay iney ka guuraan Hotelada ka fog...
XOG: Xildhibaanada & Siyaasiyiinta oo bilaabay iney ka guuraan Hotelada ka fog xeydaabyada Dowladda ee ammaankooda la adkeeyo
Cabsida amni ee ka jirta Muqdisho ayaa sii korortay ka dib markii Al-Shabaab ay sii laba jibaareen Qaraxyada iyo dilalka ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho.
Arrintaan ayaa sababtay in badi siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada miizaanka culus ku leh siyaasadda ay bilaabeen iney ka guuraan Hotelada iyo Guryaha ay ka degan yihiin hareeraha Wadada Maka Almukarama iyo waliba qaar ka mid ah degmooyinka ka fog xeydaabyada aad loo ilaaliyo ee xarumaha Dowladda.
Qaar ka mid ah Hotelada hadda siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada ay bilaabeen iney ka guuraan waxaa ka mid ah Hotel Maka Al-mukarama,Hotel Wehliye,Dayax,Hotel Saxafi oo dhammaantood ku dhirarsan Wadada mashquulka badan ee Maka Almukarama.
Mas’uuliyiintan ayaa dareemay cabsi ah iney weerar ku soo qaadaan Al-Shabaab oo dhowr jeer oo hore u weeraray Hoteladaasi.
Hotelada ugu badan ee hadda saxmada laga dareemayo waxaa ka mid ah Hotel Jaziira,Sahal iyo SYL oo ay ku kala yaalo goobo si aad ah loo ilaaliyo.
Waxaa muuqaneysa inuu faraha ka baxayo ammaanka magaalada Muqdisho,iyadoo Dowladda Federaalka ay Ciidamo oo Boolis ah dhigtay wadooyinka magaalada Muqdisho qaar ka mid ah marinada ugu muhiimsan magaalada Muqdishana ay xiran yihiin.
Shalay oo ugu danbeysay Al-Shabaab labo Qarax oo is xig xigay ayay ka geysteen magaalada Muqdisho gaar ahaan Tiyaartarka Qaranka iyo Daljirka Daahsoon,halkaasi oo dad badan ay ku dhinteen.